Mobile Service သမားများအတွက် ရှားပါး Firmware နဲ့ နမည်ကြီး FIrmware တွေ ရောင်းချပေးနေပီနော်. (09792647058) - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Home Unlabelled Mobile Service သမားများအတွက် ရှားပါး Firmware နဲ့ နမည်ကြီး FIrmware တွေ ရောင်းချပေးနေပီနော်. (09792647058)
Mobile Service သမားများအတွက် ရှားပါး Firmware နဲ့ နမည်ကြီး FIrmware တွေ ရောင်းချပေးနေပီနော်. (09792647058)
Min Oaker at 10:57:00 PM
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျ..(Firmware တွေ သင့်ရာဈေးနဲ့ ရောင်းမလို့ပါ Service သမားဆိုရင် အချိန်၃ မိနစ်လောက်ပဲ ပေးပြီး အဆုံးထိ ဖတ်စေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.) (ကြိုက်တဲ့ Brand ကို 2T အနည်းဆုံး ရွေးဝယ်လို့ ရနေပီနော်)
MTK Dead Fix Flashtool Firmware များ၊Huawei Board Firmware များ
Xiaomi 9008 EDL Firmware အစုံ ၊ Meizu Backup Flashtool Firmware များ Xiaomi Account Locked Remove Firmware များ၊ Mobile Servce လုပ်ရာတွင် အသုံးဝင်လိုအပ်တဲ့ Mobile Driver များနဲ့Computor Software များ 2000 GB ၀ယ်ယူအားပေးတဲ့ သူတွေအတွက် အပိုလက်ဆောင် ထည့်ပေးသွားမှာပါ.
- Xiaomi Firmware
- ZTE Model များအပြင် နမည်ကြီး brand တွေ နဲ့အတူ ပုံစံတူ ထွက်လာတဲ့ Clone Firmware များအပြင် China ကလည်း ထုတ်သလားမမေးနဲ့ . ဆိုတဲ့ တခြား နမည်မရှိသေးတဲ့ Firmware တွေဖြစ်တဲ့
Firmware သက်သက်ကို စုစုပေါင်း 3T (3000 GB) ရှိပါတယ်.
2T(2000 GB) ကို 50000 ကျပ်နဲ့ 3T(3000GB) ကို 80000 ကျပ်နဲ့ ရောင်းပါတယ်.
(အထူးအစီစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ အခုကျနော်ပြထားတဲ့ FIrmware တွေထဲက ကြို့်တဲ့ Model တွေကို ရွေးပီး 2T (2000 GB) ရွေးဝယ်လို့ ရပါတယ်.ကြိုက်တဲ့ Model ပါ.)
Hardisk ဈေးနှုန်းကတော့ 2T ကို 128000(Seageat) 1T ကို 75000 ပါ.
Firmware ဈေးနှုန်းကတော့ 2T ကို 50000 နဲ့ 3T ကို 80000 ပါခင်ဗျာ..
ကိုအောင်ခန့် - 09792647058
FB - https://www.facebook.com/mr.aungkhantuser